KIIMIKADA "ROGNEDA": DABEECADAHA KALA DUWAN IYO BEERISTA AGROTECHNOLOGY - KU'SAABSAN
Kiimiko, inta badan, waa dhirta aan qabin ee aan u baahnayn daryeel gaar ah ama xaalado sii kordhaya. Thanks to beeraleyda, bannaanka casriga ah ayaa fursad u leh inay dib u soo celiyaan ururadooda geedo waaweyn oo leh noocyada ugu wanaagsan ee ku habboon beerashada xaaladaha cimilada ee kala duwan.
Taariikhda noocyada taranta ee pears "Rogned"
Kala duwan ee isteroberi caan ah waa midhaha shaqada ee dhaqanka Ruushka. Loogu talagalay noocyada cusub ee u adkeysanaya barafka iyo cudurada, saynisyahannadu waxay isticmaaleen laba nooc oo waalid ah: "Mawduuca" iyo "Beauty Beauty". "Mawduuca" wuxuu inta badan u dhaqmaa sidii aasaas loogu abuuri lahaa noocyo kobcaya, laftiisuna waxay leedahay sifooyinka sare u kaca, sida iska caabinta abaarta iyo qoyaanka dheeraadka ah, dhaawacyada fungal ee caleenta iyo miraha, iyo sidoo kale adagaanta jiilaalka.
Darajada "qurxinta quruxda" - fasalka Belgian ee isdabajooga leh tilmaamayaasha dhadhanka sare, aan qabyo ahayn ee ka tegaya iyo goosashada xajiya. Iyadoo la isku darayo sifooyinka ugu fiican ee labada nooc, in luuliyo "Rogned" dadka curyaamiyay ayaa soo saaray ikhtiyaarka aan lahayn wax khaas ah oo khaas ah. Xitaa xitaa magaca magaciisa ku habboon - "Rogneda", kaas oo ku jira magaca Slavic oo macnihiisu yahay "dhasho boqortooyo."
Noocyo kala duwan oo loo yaqaan "Rogneda"
Kala duwanaanshuhu wuxuu awood u leeyahay in uu is-iskudhufo qayb ka mid ah, hase yeeshee waxay ku xiran tahay meesha uu ku yaal stamens. Sidaa darteed, si aad u hubiso fruiting, waxaa ugu wanaagsan in la daryeelo pollinators. Wixii Pear Rogned, pollinators ugu wanaagsan waa Vidnaya, In Memory of Anzin, Chizhovskaya, Milad. Dhamaan dhirta dhirta oo dhan waa in ay noqdaan kuwo isku mid ah jiilaalka-adag oo leh isla waqtiga ubax.
Waa muhiim! Marka laga beerto dalagyada pear, waxaa lagula talinayaa in ay ku beeri dhowr noocyo on sawirka, oo leh farqi yar oo ka mid ah qaangaarka.
Waxyaabaha kala duwan ee "Rogneda" ayaa leh sharrax ballaadhan, laakiin marka hore waa in la ogaadaa inay tahay mid dhexdhexaad ah, sababtoo ah dhererka geed qaangaar ah ayaa gaadhi doona wax ka badan toban mitir. Geedka ma aha jeexjeexin, caleemaha wax yar ayaa la googooyaa oo leh midab madow. Doolarka ayaa ah mid cufan, isku dhafan, qaabka huuriga ah. Caleenta cagaaru waa cagaar, caleemaha ukunta-qaabeeya ee cufan ee ilkaha ku yaala geesaha waxay ku yaalaan on petioles dheer. Waxaa jira burooyin badan, waxay u toosaan si fiican, iyo ubaxadu waxay awoodaan inay ku guulaystaan ​​dhibcaha heerkulka.
Miraha ayaa ku jira stem qaro oo leh qaab qaabaysan, oo leh miisaan celcelis ahaan 120 grams. Dareemku waa mid dhalaalaya, iyo habka koriimada waxay noqonaysaa huruud hurdi. Jidhku waa miro, midab khafiif ah. Dhadhanka midhaha wuxuu ku macaan yahay qoraallada dhirta.
Faa'iidada ugu weyn ee pear Rogned waa tilmaamayaasha dhalidda. Celcelis ahaan, hal geed oo horumariyey wuxuu ururin karaa ilaa 50 kg oo miro ah. Pear waxay u dulqaadataa isbeddel deg-deg ah heerkulka, gaar ahaan, iyo hoos u dhaca. Kala duwanaanshuhu wuxuu u adkaystaa cudurada waaweyn iyo cayayaanka geedo midho leh, sida qolof. Bannaanka ayaa ku qiimeeyay noocyada kala duwan ee "Rogned" ee waayeelka hore, iska caabiya xilliyada qalalan, iyo sidoo kale dhadhanka miro. Ka faa'iideysiga pear Rogned waa kartida kaydinta muddada dheer iyo fudaydka gaadiidka. Geedku wuxuu bilaabmaa inuu midho u dhasho sannadka saddexaad kadib marka la beero. Inta badan miraha waa la wada baabbi'iyey cusub, laakiin waxay ku fiican yihiin xilliga qaboobaha jiilaalka.
Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah mudada ah ee fruiting iyo u janjeedhka ah u qadimeen marka si buuxda u bislaaday, sidaas darteed goosashada ee isteroberi ah waxaa lagu fuliyaa marxaladda baaxad iftiinka.
Ma taqaanaa? Waxyaabo badan oo kala duwan ayaa laga sameeyaa qoryo budo ah: alaabta guriga, maacuunta jikada, taliyeyaasha, qalabka muusikada. Naxariistii qoryaha khatarta ah waa in aysan u nuugin aromada, waa mid adag oo aan la dhisi karin.
Qaababka beeritaanka geedo geedo kala duwan ah "Rogneda"
Taariikhaha la aqbali karo ee loo yaqaan pear rogned: Abriil (ilaa caleemaha Bloom) ama tobanka sano ee hore ee Oktoobar.
Doorashada meel bannaan
"Pear" "Rogneda", haddii aad ilaaliso xeerarka beerashada iyo daryeelka, waxay ka jawaabi doonaan hadhuudh, dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh. Dooro boos khafiif ah pear, haddii kale miro waxay noqon doontaa dhanaan, oo hooska pear wuxuu dhalin doonaa dalagga yar. Iska ilaali marinka u dhow biyaha dhulka, iyo meelaha hoose ee dhulka ciidda waa inay lahaadaan dheecaan wanaagsan. Cudurka dabiiciga ah ee ciidda waa inuu u dhigmaa heerka pH ee 5.6-6.
Doolda ee seedling waa in ay ahaataa qiyaastii 80 cm ee size, iyo masaafada u dhaxaysa geedo waa inay ahaataa ilaa hal mitir iyo badh. Maaddooyinka ugu wanaagsan ee laga beerto waa geedo laba-saddex jir ah, oo leh geedi-socodka xooggan oo dabacsan, iyada oo aan la arki karin waxyeello.
Dhulka carrada waxaa lagu qasan yahay humus iyo ciid laba baaldiyo, ka dibna ku dar 800 garaam oo ash alwaax ah. Ka hor inta beerto toos ah, xididdada seedling waxaa lagu rusheeyey xal kicin. Kadibna, ku shub qeyb ka mid ah ciidda la diyaariyey ee ceelasha, dhig seedling, toosi xididdadiisa, dabooli ciidda haray iyo burburin, waxoogaa cadaadinaya. Qoorta asalka ah ee seedling waa 5 cm ka sareeya dusha ciidda. Ka dib markii laga beerto, dhirta yaryar waxay ku xiran tahay qoryaha waxayna ku waraabin jireen waxyaabo badan, ka dibna waxay ku daboolan yihiin goobo jireed leh mulch.
Waa muhiim! Markaad koofiyeysid pear oo aan lahayn jilaalka ciidda, waxaa lagama maarmaan ah in dhirta loo qodo dhexroor ballaaran si aaney u waxyeeleynin xididada, iyo ka dib markaad ka saarto, waxaa lagu nadiifiyey dhulka foornada.
Noocyada daryeelka ee noocyo kala duwan ah "Rogneda"
Sida pear-ka kale dhaqameed waxay u baahan tahay waraabinta, bacariminta iyo nadiifinta waqtiga nadiifinta ciidda ka timaada caws.
Sida loo ilaaliyo pear ka soo cayayaanka iyo cudurada
Xitaa kuwa ugu adkeysanaya cudurka iyo cayayaanka baahida dhaqanka cayayaanka, iyo marmarka qaarkood tallaabooyin difaac adag. Ilaalinta cayayaanka la arko ee ka soo jeeda cayayaanka ayaa inta badan lagu sameeyaa iyadoo lagu buufiyo kiimikooyinka, inkastoo mararka qaarkood daawooyinka dadku caawiyaan: faleebo marigold ama toon, tufaaxa yaryar. Fungicides, daaweynta prophylactic guga hore ka hor barar kilyaha ama ku-soo-kabasho ku-celis ah ee jirro xanuun ayaa ilaalin doona pear-ka cudurada.
Waxay biyuhu maraan afar jeer bishii, iyo toban litir oo biyo ah hal geedka hal qof weyn. Haddii ay dhacdo abaar daran waxaa suurtogal ah in lagu buufiyo caleenta.
Xiiso leh Qodobka ugu horreeya ee qoraalka ah ee pear-ta taariikhda ahaa ee sannadka labaad ee BC. e. Koonfurta Aasiya waxaa loo tixgeliyaa meesha ay ku dhalatay isteroberi. In Europe, geedka wuxuu yimid 1000 sano BC. e., iyo Ameerika oo kaliya ayaa helay afar boqol oo sano ka hor.
Kalluunka cagaarka ah "Rogned" ayaa lagu sameeyaa asalka. Bacriminta dabiiciga ah ama maaddooyinka macdanta culus ee dhirta khudradda ayaa si fiican ugu habboon doorka dharka. Cunto qudaarta xilliga firaaqada firfircoon, inta lagu jiro ubax, iyo sidoo kale samaynta miraha. Ka dib markii dharka, ciidda ku wareegsan geedka waa mulched.
"Maqal" waa la qabtaa sannad walba, taajkii waa la qalajiyay, caleemaha xoogaana way sii jirayaan. U hubso in aad nadiifiso laamood oo daciif ah oo dhaawacan, caleemo qalalan ama jaban. Tartanka khafiifka ah wuxuu kordhiyaa tayada fruiting wuxuuna yaraynayaa halista cudurka.
Kajirinta "pears" "Rogned" ee dhexda dhexe ayaa aad muhiim u ah. Kala duwan waa jiilaalka-adag, wuxuu leeyahay difaac, labadaba cudurada iyo musiibooyinka dabiiciga ah: abaar ama isbedel deg-deg ah oo heerkul ah. Ilaa heerkulka hooseeya waa adkaysi iyo midabka pear, taas oo ah xaaladda ugu muhiimsan ee dalagyada miraha ah.